Kooxda Foton Motor - Foton Motor Group Co., Ltd.
Kooxda Foton Motor
U fidinta alaabooyin iyo adeegyo qiimo-sare leh isticmaaleyaasha maxalliga ah, iyo hirgelinta heer caalami ah oo horseed u ah soosaarida gawaarida iyo heerarka hawlgalka gobollada kale oo leh ganacsigeeda.
Sameynta horumar deg deg ah ganacsiga gawaarida ganacsiga.
HOGAAMINTA GANACSATADA SHIINAHA
Shirkadda Foton Motor Group waxaa la aasaasay 28-kii Ogosto 1996, waxayna xarunteedu tahay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. Iyada oo baaxad ganacsi oo dabooleysa taxane buuxa oo gawaarida ganacsiga ah oo ay ku jiraan gawaarida dhexdhexaadka ah iyo kuwa culus, gawaarida xamuulka fudud, gawaarida yar yar, basaska qaada, iyo gawaarida qalabka dhismaha iyo soosaarka wax soo saarka iyo iibka ee qiyaastii 9,000,000 gawaari. Qiimaha Foton Motor Brand waxaa lagu qiimeeyay qiyaastii US $ 16.6 bilyan, oo ah darajada MAYA. 1 13 sano oo isku xigta gudaha Shiinaha gawaarida ganacsiga.
Ku noqoshada shirkad caalami ah oo soo saarta gawaarida ganacsiga adduunka.
HIIGSIGA & ARAGTIDA
Tan iyo aasaaskeedii, Foton Motor wuxuu diiradda saarey dhisidda mustaqbal ka buuxa is-waafajinta aadanaha, baabuurta iyo dabeecadda.
sawirka dheeman ayaa loo soo qaatay inuu yahay astaanta astaanta ah ee Foton Motor, waxay muujineysaa tikniyoolajiyad, tayo, qiime sare iyo joogto. Foton "Dheemanta dhalaalaysa" waxaa loo ekaysiiyaa dheeman dhalaalaya, taas oo muujineysa sida Foton ay uga go'an tahay hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, daryeelka aadanaha iyo quruxda wada noolaanshaha.
Foton Motor wuxuu horseed u noqon doonaa mustaqbalka dhaqdhaqaaqa, si joogto ah ayuu u abuurayaa qiimayaal weligiis ah oo qumman oo loogu talagalay daryeelka macaamiisha, bulshada iyo aadanaha.
Waxaan FOTONER had iyo jeer higsaneynaa inaan ka hortagno yoolalka sare, qabashada fursadaha horumarineed ee waara, kor u qaadista heerkayaga ku tiirsanaanta, kalsoonida iyo qanacsanaanta macaamilka, wadista nolol casri ah iyadoo loo marayo ballanqaadka teknolojiyada isku dhafan.
FARSAMADA FARSAMADA UGU HOGAAMINAYSA MUSTAQBALKA
Ku hogaaminta wadada soo saaraha gawaarida ganacsiga ee caalamiga ah.
Bishii Ogosto, 1996, Foton Motor waxaa laga aasaasay magaalada Beijing Shiinaha.
Gaarigii ugu horreeyay ee FOTON AUMAN ayaa dhashay.
Bishii Ogosto, 2002, FOTON AUMAN waxaa si guul leh looga jaray khadkii isku imaatinka Shiinaha.
AWOODDA BASKA, ISKU DAY LAYNKA GOLAHA.
Bishii Noofambar 2004, gaadhigii 1,000,000th, baska FOTON AUV, ayaa ka baxay layntii isku imaatinka.
SHOWGA AUMAN ETX YURUB.
Bishii Sebtember 2006, matxafka tikniyoolajiyadda Speyer-ka Jarmalka ayaa aruuriya Auman ETX. Maalinta ku xigta, Auman ETX wuxuu ka qaybqaataa tartanka bandhigga gawaarida Mercedes-Benz ee ku yaal dunida caanka ah Formula One F1 ee Hockenheim.
FOTON CUMMINS OO ISKU DUWAN SHAQADA
Bishii Maarso, 2008, heshiiska wadajirka ah ee Foton iyo Cummins, Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd., ayaa si rasmi ah loo aasaasay.
FOTON LOGO IMAGE IMAGE OO LA BILAABAY.
Bishii Ogosto, 2010, FOTON waxay soo bandhigtay astaanta cusub ee calaamadda "Dheemanta Birta ah", taas oo muujineysa sida Foton ay uga go'an tahay hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, daryeelka aadanaha iyo quruxda wada noolaanshaha.
GAADIIDKA 5,000,000TH FOTON KA SOO RIIXAY LAYNKA GOLAHA.
Bishii Sebtember, 2011, FOTON'S 5,000,000th gaari ayaa ka soo baxay khadka isku imaatinka Shiinaha.
FOTON DAIMLER SHAQO SHAQO GAAR AH OO LA SAMEEYEY.
Bishii Febraayo, 2012, heshiiska wadajirka ah ee Foton Daimler Automotive Co., Ltd. waxaa lagu aasaasay magaalada Beijing Shiinaha.
FANAANADA FOTON OO LAGA SAMEEYAY
Bishii Abriil, 2013, baabuurkii ugu horreeyay ee fasal ganacsi - FOTON VIEW CS2 ayaa laga bilaabay Shiinaha.
Bishii Janaayo, 2014, FOTON waxay u dirtay TUNLAND inay kula tartanto Dakar 2014 markii ugu horreysay.
Bishii Janaayo, 2016, FOTON TUNLAND iyo SAUVANA waxay ku hawlan yihiin isu soo bixii DAKAR 2016.
Bishii Sebtembar, 2016, FOTON gaari cusub oo dhexdhexaad ah oo culus - AUMAN EST, ayaa lagu soo bandhigay IAA ee Jarmalka。
FOTON SMART DARAWALKA FIKRADKA SHIRKA
Bishii Nofeembar, 2016, FOTON gaari xamuul wadista ugu horreeya oo caqli badan ayaa laga bilaabay magaalada Shanghai Shiinaha.
FTON ZF SHAQO SHAQO OO LA AAS AASAY
Bishii Sebtembar, 2017, shirkadda wadajirka ah ee Foton ZF ayaa la aasaasay. Waxaa la daahfuray xafladda dhul-goynta ee mashruuca gudbinta otomaatiga ah ee Foton & ZF.
Hogaaminta ganacsiga gawaarida ganacsiga ee Shiinaha
Uusoo boodka Hore ee Shirkad Caalami ah